Inona no Nalaza Indrindra Ary Historical Train Routes | Save A Train
an-trano > Travel Europe > Inona no Nalaza Indrindra Ary Historical Train Routes
Ny whooshing feon'ny lamasinina manatona an- peo, ary ny mety hisian'ny mahazo mandeha any amin'ny tanteraka sy tsy nampoizina. Afaka mieritreritra ny zavatra tsara kokoa noho ny Famous sy Historical Train Routes?
Lamasinina dia fampahatsiahivana ny L'Âge d'Or ny mandeha. Rehefa nandeha olona dia nandeha nandritra ny volana maro amin'ny fotoana sy soavaly dia mety tafiditra. Travel Tsy momba ny hahazoany fahafinaretana vetivety fotsiny ihany miandrandra ny toerana itodiana.
tsy misy, Travel midika nankafy ny dia. Fonosana amin'ny vatan-kazo, ary angamba ny kompà sy ny maro tsara sarintany. Travel midika handeha ho any amin'ny toerana izay tsy misy olona nahafantatra, izay na dia ny rivotra nahatsiaro ho hafahafa sy ny taratasy an-trano ihany no mety tonga araka ny hiverina.
Ao amin'ny fanomezam-boninahitra ny tena mahafa-po fomba fitaterana, Save A Train mitondra anao ny lisitry ny Famous sy ara-tantara fiaran-dalamby lalana tokony handray 2019!
London ho any Venice amin'ny Orient Express – Lalam-by fiaran-dalamby malaza sy lava indrindra
Izany dia antoka indrindra ho toy ny avo roa heny ny daty manan-tantara! Ity angamba no lalam-by malaza sy malaza indrindra ary a tantaram-pitiavana fiaran-dalamby lalana eto amin'izao tontolo izao. Miainga avy any Paris amin'ny lalana ho any amin'ny tanànan'i Byzance Istanbul. Afaka Tamin'ny fitsipika tapakila avy SaveATrain handeha lalana ity, na hifidy ny amin'ny safidy glamorous kokoa sy mitsambikina amin'ny Orient Express. Ny fiokoana ity dia malaza mihaja fiaran-dalamby ara-tsindrimandry Agatha Christie. Izany andro izany fa tsy miasa intsony amin'ny teny am-boalohany ny toe-tsaina mbola velona any Belmond ny Venice-Simplon Orient Express. Misy fiarandalamby roa, raha ny tena izy, ny iray miaraka amin'ny kalesy miaraka amin'ny taona 1920 sy ny 30 taona ary ny iray manan-tantara British Pullman fiaran-dalamby.
Ny lalana vaovao rivotra ny lalana avy LONDRES ho any Venice, indraindray anisan'izany ny hafa toerana any Eoropa, ary ny indray mandeha isan-taona tany am-boalohany Istanbul Paris-dalana tamin'ny volana Aogositra.
Tapakila fiaran-dalamby any Venice
Tapakila fiaran-dalamby any Florence mankany Venice
Tapakila Bologna mankany Venice Train
Roma mankany amin'ny tapakilan'ny lamasinina Venice
Hamburg ho any Copenhagen
Ianao dia tokony nandeha tamin'ny fiaran-dalamby izay azo entina amin'ny baka. Izany no antoka iray amin'ireo Famous fiaran-dalamby ara-tantara sy ny lalana tokony handray in 2019!
Noho izany, Rehefa inona no mitranga any am-Ferry? Soa ihany mpandeha fiaran-dalamby dia tratry ny ananany eny ny lamasinina, ary mankafy ny toerana manodidina ny sambo indray mandeha baka. Ianao hiampita ny ranomasina Baltika in 45 minitra. Ny fiaran-dalamby iray manontolo dia maharitra 4 ora sy 45 minitra. Copenhagen sy ny misokatra mihatsaravelatsihy ampemby mofo voasesika ary tsy mampino endrika hatsarana dia mahay mandanjalanja fiaran-dalamby feno olona tao Jerosalema tapakila lavitra Hamburg, Alemaina fa afaka mazava ho azy, levitra aminay, dia hanana ny bokotra amin'ny faran'ity lahatsoratra bilaogy ity.
Glacier Express - Soisy
Mampifandray roa Toerana mahafinaritra indrindra Soisa tendrombohitra Resorts, Zermatt sy St Moritz, ny Glacier Express no miala voly indrindra fomba mankafy ny mahavariana toerana manodidina ny Nanketo Alpes eto Soisa. Nahoana no nifidy izany ho iray amin'ireo malaza indrindra sy ny fiaran-dalamby ara-tantara lalana tokony handray in 2019?
Nandeha atsinanan'i Zermatt, ny andro-dia lavitra fonony 91 tonelina sy ny 291 tetezana tahaka ny faritra atsimon'i Soisa lasa pahatonga ny Alpine ny kijana, madio mangalahala tendrombohitra farihy, sy ny zana-bohiny sary-tonga lafatra. Zava-nisongadina Tamin'ny dia ahitana Oberalp Pass, teboka ambony indrindra teo amin'ny mitaingina amin'ny 6706 feet. Ny anankiray hafa dia ny olo-malaza Landwasser Viaduct - tsara tarehy-andohalambo enina rafitra nijoro teo 200 tongotra sy iza na iza miditra amin'ny tonelina nanapaka mahitsy ho any an-tendrombohitra.
Interlaken ho Zermatt Lamasinina
Lucerne mankany tapakila fiaran-dalamby amin'ny Zermatt
West Highland-dalana,, Glasgow ny Mallaig - Scotland
Izahay amin'izao fotoana izao ny TV andevozin'ny andian Outlander, izay mifantoka amin'ny ela-Scotland sekoly karazan'omby. Noho izany tsy misy mahagaga izany eo amin'ny lisitry ny Famous sy Historical Train Routes. Ny West Highland-dalana, dia manaporofo tsara ny hiaina ny firenena an'ala, morontsiraka andrefana. Raha vao miala ny fiaran-dalamby Glasgow - Ekosy ny tanàna lehibe indrindra - ny tanàn-dehibe haingana tontolo maitso mavana intsony àry glens sy milamina lochs. LOHATENY avaratra, ny West Highland-dalana, mandalo ny efitra mitokana ny Rannoch Maoro. Izany dia mandalo ny mijoalajoala Ben Nevis, mikasika an Fort William. Tari-dalana sy ny mandroso ara andrefana, ny fiaran-dalamby traverses ny Glenfinnan Viaduct (asongadina ao amin'ny Harry Potter sarimihetsika andian-dahatsoratra) alohan'ny be olona na be tonga tao amin'ny seranan-tsambon'i Mallaig.
Tapakila fiaran-dalamby ao London
Tapakila Lyon to London Train
Malaza sy ara-tantara Train Routes tany Angletera
Mpandeha rail Travel dia iray amin'ireo anjara biriky lehibe ny Britanika Victoria Age. Tamin'ny taonjato faha-20, lalamby hafanam-po sy ny lalamby hobbyists toa efa hampielezana saika toy ny fifadian-kanina tahaka ny lalamby ny tenany. Manan-tantara etona fiarandalamby, manokana Toerana mahafinaritra nandehanany, ary ny habetsahan'ny lalamby tery no naverina tamin'ny laoniny. Eto, dia ho hitanao ny sasany amin'ireo tsara indrindra sy ny lova etona fiaran-dalamby lalamby nandehanany. Tadiavo azy tany andrefana Aho fivondronana ny Cornwall, Devon, Somerset, ary Dorset.
Rehefa be dia be ny fiaran-dalamby ireo dia naverina tamin'ny laoniny etona fiarandalamby, Save A Train tsy manome azy tapakila. na izany aza, ataontsika manome ny Price tsara indrindra fa mahazo ny sy ny fanjakana Mitambatra.
Te-hiaina Famous sy ny fiaran-dalamby ara-tantara lalana?
Lohany amin'ny eo Save A Train sy ny Bokin'i ny tapakila ao amin'ny 3 minitra.
Te hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay ao amin'ny tranokalanao ve ianao, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / ru ny / en na / de sy ny maro hafa fiteny.
#malaza	#FamousTrains	#Fitsangatsanganana ara-tantara	europetravel	longtrainjourneys	Train Station	fiaran-dalamby soso-kevitra	Train Travel